चीनको सदिच्छा : केपी ओली र प्रचण्ड मिलून् ! सम्भव छ पुनः एकता ?
२०७४ सालमा दशैंको खुशीको उपहार भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय चुनावमा तालमेल गर्ने र एउटै पार्टी बनाउने खबर सार्वजनिक भएका थिए । २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुने त्यसवर्षको दशैंलगत्तै सार्वजनिक हुँदा नेपालको राजनीति निकै तरङ्गीत भएको थियो ।
त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो । पहिलो ९ महिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरी पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पेका थिए ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व देउवालाई जिम्मा लगाएपछि केही फुर्सदिला भएका प्रचण्ड र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना सहयोगी नेतामार्फत संवाद अघि बढाए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलको सम्भावनाको आकलन समेत नभएको बेला २ पार्टी एकताको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
दुवै पार्टी एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा २ अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच कुरा मिल्न छाडेको थियो । त्यहीबेला नामको विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीले रोजेको नाम पहिल्यै अर्को पार्टीले लिएकाले नेकपा नाम दिन नसकिने फैसला गरेपछि २ पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् ।
त्यसमा पनि २०७७ पुस ५ गते पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि नै २ पार्टीको अलग यात्रा तय भइसकेको थियो । त्यसलाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्तिम किनारा लगाइदियो ।
२०७८ सालको दशैंमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको चर्चा बहसमा आएको छ । यो चर्चालाई सहतमा ल्याइदिएकी हुन् नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ।
असोज २६ गते नेपाल डाइलग फोरमले आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सहभागी भएकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्न आवश्यक रहेको सल्लाह दिएकी छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २ पार्टी मिल्दा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सहयोगी हुने धारणा राखेको बताए ।
‘चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी १०० वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल डाइलग फोरमले पुस्तक प्रकाशन गरेको रहेछ । पुस्तक विमोचनको क्रममा चीनको विकास र समृद्धिको चर्चा भएको थियो । नेपालमा पनि विकास समृद्धिको लागि माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा राम्रो हुने चर्चा राजदूतले गर्नुभएको थियो,’ बस्नेतले भने ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताका लागि चिनियाँ चासो प्रकट भएको यो पहिलो सन्दर्भ होइन । एमाले र माओवादी एकीकरणबाट छुट्टिएपछि चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक रूपमा एकताको लागि सल्लाह दिएको भने यो पहिलो हो तर २ पार्टी मिलेर नेकपा रहेको बेला पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन र विभाजन टार्नको लागि चिनियाँ पक्षले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो ।
संसद विघटनपछि नेताहरूबीच देखिने गरी कित्ताकाट भयो । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा उनीहरू उभिए । पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई कारबाहीको शृंखला चल्यो । नेकपा भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका नेताहरूको मन बुझ्नका लागि चिनियाँ उपमन्त्री नेतृत्वको टोली काठमाडौं ओर्र्लिएको थियो ।
अहिले सम्भव छ एमाले–माओवादी एकता ?
अहिले २ पार्टीको मुख्य विवाद संसद विघटनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले निम्त्याएको छ । त्यसले देशको राजनीतिलाई नै २ ध्रुवमा बाँडिदिएको छ । एउटा कित्तामा संसद विघटन गरेर आएका र त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्ष छ भने अर्कोमा संसद विघटनलाई प्रतिगामी भनेर बनेको गठबन्धन छ । संसद विघटन विरोधी कित्ता प्रभावशाली छ ।
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले २ पार्टी मिल्न सुझाव दिएको भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सान्दर्भिक नभएको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत बताउँछन् ।
‘हाम्रो शुभेच्छुकले देशको विकास र समृद्धिको लागि पार्टीहरू मिलेर अघि बढून् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो तर वर्तमान परिस्थिति त्यस अनुकूलको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘संसद विघटन गर्ने र त्यो बेठीक हो भन्नेहरू फरक कित्तामा उभिएका छन् । शुभेच्छुकहरूले राखेको सदिच्छालाई धन्यवाद भन्न सकिन्छ ।’
अहिले नै भविष्यको आकलन गर्न नसकिने बस्नेत बताउँछन् । ‘एमाले–माओवादी मिल्छन् र फेरि छुट्टिन्छन् भन्ने आकलन कसैले गरेको थिएन । फेरि भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अहिल्यै आकलन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
तर चिनियाँ पक्षले निरन्तर रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट एकताको लागि पहल र पैरवी गर्दै आएको छ ।